Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba eziHlumayo zase-UK » I-COVID-19 Spike isongela i-UK yokuHamba kwasekhaya ukuHamba
Airlines • isikhululo • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Ukuqasha imoto • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • iindaba • Ukuhamba ngololiwe • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba eziHlumayo zase-UK • Iindaba ezahlukeneyo
Agasti 6, 2021
Kunye nezithintelo eziqhubeka ziguquka kuhambo lwamazwe aphesheya, iiholide zasekhaya zibonakala njengebheji ekhuselekileyo kwikota yangoku.
Iiholide zasekhaya zimiselwe ukuba zezona zidumileyo e-UK kwiinyanga ezili-12 ezizayo.
I-spike enkulu kumatyala e-UK anokunciphisa ukuzithemba kwabahambi abathile.
Amashishini ohambo alungiselela ihlobo elixakekileyo anokuba namava okurhoxiswa okanye okumiswa emva kwexesha.
Ngaphandle kwemfuno yokuhlala kwi UK Ukomelela, ukunyuka kosulelo lwe-COVID-19 kunye nemfuno yokuzikhetha ngokwakho ukuba 'ucinezelwe' kunokubeka emngciphekweni izicwangciso zasehlotyeni, kwaye abaqhubi bezokhenketho banokuphulukana nengeniso efunekayo kweli hlobo.
Ityala le-COVID-19 linokubeka emngciphekweni ukubuyela kwakhona e-UK kweli hlobo
Ngokophando lwakutsha nje, iiholide zasekhaya zimiselwe ukuba zibe zezona zidumileyo kwiinyanga ezili-12 ezizayo, nge-30% yabaphenduli base-UK bakhetha olu hlobo lohambo, bezantsi kancinci kune-32% yabaphenduli behlabathi abakhetha uhambo lwasekhaya. Kunye nezithintelo eziqhubeka ngokutshintsha kuhambo lwamazwe aphesheya, iiholide zasekhaya zibonakala njengebheji ekhuselekileyo kwikota yangoku.
Ngaphandle kwemfuno ephezulu, i-spike enkulu kumacala aphesheya UK inokunciphisa ukuzithemba kwabahambi abathile. Ngeemeko ezikhulayo, abahambi kunokwenzeka ukuba bathathe indlela yokulumka kuhambo lwasehlotyeni. Amashishini ohambo alungiselela ihlobo elixakekileyo anokuba namava okurhoxiswa okanye okuhlehliswa njengoko abanye benentloni kwiindawo ezixineneyo zokhenketho njengoko amatyala enyuka, ngaphandle kothintelo.
'I-pingdemic' ibethe i-UK ngamandla, ngabantu abangama-618,903 abafumana isaziso sokuzahlula phakathi kwe-8 ne-14 kaJulayi. Olu kunyuka nge-17% kwiveki ephelileyo.
Ngenombolo yerekhodi ebotshiweyo, ukuhamba kusenokwenzeka ukuba kuphazamiseke kweli hlobo. Ixesha lokuzahlula likumakhadi abo bacinezelweyo, kwaye ukuthintelwa kugcinwa ekhaya kungachaphazela ukubhukisha kweeholide. Abantu ababanjiweyo abanokubhukisha okusondeleyo banokucima njengoko bengasakwazi ukuhamba. Ngamatyala akhulayo ngenxa yokwahluka okungasasazekiyo kweDelta kwaye ngaphezulu kuyalelwa ukuba kukhethwe, ukuhamba kujongeka kumiselwe ixesha elinobunzima. Ngaphandle kokuthintelwa kokuncitshiswa kunye nethemba lokuba imvuselelo yasehlotyeni iphakeme, 'i-pingdemic' inokubanakho ukuthintela uhambo kunye nokuthintela ukubuyela ekhaya kwe-UK.
Ukomeleza ukubhukisha uninzi lwabasebenzisi bazise imigaqo-nkqubo yokubuyiselwa kwemali enobubele kwaye banokujamelana nethemba lokubuyisa abahambi ukuba amatyala ayenyuka, kwaye ukubhukisha uhambo kuyachaphazeleka.
Imigaqo-nkqubo yokubuyisa enomtsalane iqhube ukuthengisa okwandileyo kwabaqhubi abaninzi, nangona kunjalo, ukonyuka kwamatyala e-COVID-19 anokuqala ukuba nefuthe kwingeniso yomqhubi. Ukuhamba kwemali kunokoma kwabaqhubi abachaphazeleke ngumthamo omkhulu wokurhoxiswa, umvuzo unokuwa, kwaye ubunzima bezemali buqhubeke.
Ukujongana nokufaneleka kwiLizwe elitsha lokuHamba
Ukhenketho kwiSibhengezo saseGlasgow ngoTshintsho lweMozulu...
Agasti 6, 2021 kwi-19: 42
I-Itali ikweso sikhephe sinye!